Famokarana angovo: miezaka miala amin’ny solika ny Jirama | NewsMada
Famokarana angovo: miezaka miala amin’ny solika ny Jirama
Par Taratra sur 04/08/2018
Miezaka ny hanova sy hanatsara ny fitantanana ao aminy ny Jirama, amin’izao fotoana izao, miaraka amin’ny minisiteran’ny Angovo. Tanjona ny hanoloana vaovao daholo ireo milina efa antitra ao aminy, hialana miandalana amin’ny fampiasana solika.
Miditra amin’ny fampiasana angovo azo havaozina izany izao ny Jirama. Marihina fa amin’izao taona 2018 izao, mbola 70 % ny famokarana angovo mandeha amin’ny gazoala sy ny solika mavesatra, an’ny Jirama sy vidina amin’ny orinasa hafa.
Tsy misy afa-tsy angovo 200 Mw ny vokarin’ny Jirama, amin’izao fotoana izao ka ny tanjona napetraka, ny hahatrarana 1000 Mw, amin’ny taona 2026 na 2027, hialana tanteraka amin’ny fampiasana solika, raha ny voalazan’ny ao amin’ny Jirama. Afaka roa taona, tokony efa hiakatra 300 Mw izany, ka ny fototry ny famokarana angovo avy amin’ny rano.
Mampanahy anefa ny famokarana herinaratra eto amintsika raha ny momba ny rano izay, noho ny fivadihan’ny toetr’andro mihamafana hatrany, ato anatin’ny 25 taona ho avy. Eo koa ny tsy fitandremantsika ny tontolo iainana manapotika ny ala, mampihena ny rano. Na izany aza, efa misy ihany ireo orinasa tsy miankina mitrandraka ny angovo avy amin’ny masoandro, izay tokony harahin’ny Jirama ihany koa. Raha feno daholo izany ny fepetra, ho tratra ny 1.000 Mw an’ny Jirama, ny taona 2026 na 2027. Nefa ny tinady mila hatrany amin’ny 5.000 Mw ho an’ny fampandrosoana marina, na IEM na Vina 2030.